Abasebenzisi abaliqela baxela impazamo kwi-firmware xa befaka iMacOS ePhakamileyo yeSierra | Ndisuka mac
Abasebenzisi abaninzi baxela impazamo ye-firmware xa ufaka iMacOS ePhakamileyo yeSierra
Kubonakala ngathi abasebenzisi abaninzi banokunika ingxelo ngeengxaki kufakelo lweMacOS ePhakamileyo yeSierra kwaye kukuba kukho impazamo xa kuhlaziywa i-firmware. Asaziqondi kakuhle izizathu zale mpazamo kuba ayisiyiyo into eyenzeka kubo bonke abasebenzisi, kodwa yindawo yokuqala yokubonisa ukungangqinelani nefomathi entsha ye-APFS kunye nee-SSD.
Uhlaziyo luqala ngesiqhelo kwezi khompyuter kwaye emva koko lubonise impazamo njengoko kubonisiwe kumfanekiso esinokuwabona kwintloko yeli nqaku -ngomsebenzisi u-Osiris- kunye yonke inkqubo iyayeka. Impazamo icacile: isilela ngelixa "ikhangela i-firmware".
Kubonakala ngathi kukho inani leeMacs ezineediski ezinengxaki yokungahambelani kwaye ezi zongezwa kolu luhlu umenzi we-OWC uxele iingxaki ezifanayo, zezi:
IMacBook Air (11-intshi, Mid 2013)
IMacBook Air (13-intshi, Mid 2013)
IMacBook Air (i-intshi eyi-11, ekuqaleni kuka-2014)
IMacBook Air (i-intshi eyi-13, ekuqaleni kuka-2014)
IMac Pro (ngasekupheleni kuka-2013)
Abasebenzisi abaliqela bathi mabangabinazo ezi diski zifakwe kwi-Mac kwaye banempazamo efanayo ngexesha lohlaziyo. Ngayiphi na imeko ekuphela kwento esinokuyenza yile Sebenzisa ulwahlulo lokubuyisela, ukhuphelo okanye ukhuphele ngqo kwi-macOS nge-WiFi, kodwa enye into encinci. Into ebonakalayo kukuba ukuba iyasilela ukuhlaziya i-firmware asikwazi ukuphucula inguqulelo kwaye ekuphela kwento elungiselelwe ngoku kukulinda isichibi okanye uhlaziyo oluvela kwi-Apple. Asizukuphelelwa yi-Mac kuhlobo lwangaphambili lwe-macOS, kule meko iMacOS Sierra.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » i-MacOS High Sierra » Abasebenzisi abaninzi baxela impazamo ye-firmware xa ufaka iMacOS ePhakamileyo yeSierra
Izimvo ezi-48, shiya ezakho
Ndine 27 ″ i7 iMac ngasekupheleni kuka-2009 nge-500Gb WD Blue SSD kwaye indinika impazamo xa ndihlaziya kwi-High Sierra, ndizamile amatyeli amaninzi kwaye akhonto
Molo, ndingumsebenzisi weMacBook Pro, bendifaka iMacOS ePhakamileyo yeSierra nayo yonke into eqhelekileyo, ndiyivumele yenze yonke into, ndiye ndalala nje kwaye xa ndivuka ndifumana umyalezo wemposiso kwaye ithi ukuqala kwakhona, ndiyakwenza ngoku , iMac yam ayidluli ekuqaleni kwesiqendu, ilayisha oonobumba abancinci abamnyama kwaye iyazibuyisela ngokwayo emva koko umyalezo ubonakala ngathi unempazamo ekuqaliseni, linda imizuzwana embalwa ubuye, ndiyenzile yonke inkqubo kunye kwinto enye ekufuneka ndiyenzile okanye into endinokuyenza iyaqhubeka
U-vlvaro Augusto Casas Vallés sitsho
LUMKELA ukuba ayingabo abo, ngethamsanqa, ithebhulethi yemizobo ye-wacom, andazi ukuba ndiyikhankanyile na apha kodwa ukuba bayahlaziya kwi-sierra ephezulu i-wacom inayo abaqhubi ngaphandle kokuyihlaziya kwaye kude kube se-Okthobha akukho nto.
Phendula u-vlvaro Augusto Casas Vallés
Indinike enye impazamo ..
Msgstr "Impazamo yeCom.apple.DiskManagemwnt 0",
Ndiyithathile ndiyisa kwinkonzo yezobuchwephesha kwaye yenzeka ngokufanayo, ndizakuzama ukuyifaka ukusuka ku-0,
UJuan Ma Noriega Cobo sitsho
Ngethamsanqa ndiwupasile ngokwaneleyo umbandela. Kungcono ulinde
UAlbert Malaga sitsho
Xa uyihlaziya, isikrini sokugqibela asinanto kwaye asiyi kuqala kwakhona, kucingelwa ukuba ifakwe kakuhle. Kuya kufuneka ucinezele iqhosha ucime kwaye uvule kwakhona ...
Phendula u-Albert Malaga
UIsake Fusté Sanz sitsho
Impazamo yenzekile kum kwi-MBP yam ukusukela phakathi ku-2010, ine-Samsung SSD.
Ndayifaka i-SSD endaweni ye-CD drive.
Phendula uIsaac Fusté Sanz
Ngokuqinisekileyo iApple izoyisombulula, njengamaxesha onke ...
Kulungile kusasa, wonke umntu.
Impazamo efanayo nale ichazwe ngu-Osiris.
Ndine 27 ″ iMac ukusukela ngasekupheleni kuka-2009.
Ndinezixhobo ezifanayo kwaye ndinengxaki efanayo ne-ssd 240gb ebalulekileyo.
Kubonakala kum ukuba ndiza kubuyela eSierra kwaye ukusuka eSierra ndiya kuhlaziya sesona sicwangciso sam sihle
UJose Hurtado sitsho
NdineMac 27 i7 ngasekupheleni kuka-2009 apho nditshintshe i-dvd nge-240 gb ebalulekileyo. Ukuqala kwam ukuzama ukuyihlaziya kwandinika impazamo kwi-firmware. Kodwa ndizamile okwesibini kwaye yandisebenzela kwaye ngoku ikwi-apfs. Phakathi kwemizamo emibini andenzanga nto.
Phendula kuJosé Hurtado
Umntu othile usifumene isisombululo kum ngokuchanekileyo kwenzeka into efanayo kum, andifuni kuphulukana neefayile zam
IMacbook Pro Mid 2010 kunye neSandisk Plus SSD indinika impazamo kwaye ayiyi kuhlaziya, iyandithumela ukuqala kwakhona.
IMacbook Pro toshiba hard drive, ndifumana iimpazamo zenkqubo yeepakethe ze-Os njl njl ... isonjululwa njani? Okanye siza kuba nesisombululo nini?
Impazamo efanayo ye-firmware:
iMac (27 intshi, ngasekupheleni kuka-2009)
I-2,8 GHz Intel Core i7
I-CT750MX750SSD300 1 Gb SSD ebalulekileyo
NgeMac 27 »I3 2010 Nditshintshe iDVD ye-SAMSUNG 840 PRO SSD
kwaye yafakwa ngaphandle kwengxaki.
Ndikunye neMac Pro (ngasekupheleni kuka-2013) onke amacandelo asemthethweni.
Akukho ndlela, nokuba akukho kwivenkile yeapile, okanye nge-USB eqalekayo.
Nokuba ungaqala kwi-OSX yoqobo, kwimeko yam Mavericks
Njalo impazamo yokungqinisisa i-firmware.
Ndithethile no-Apple ngenkxaso yezobuchwephesha, kwaye bathi abanangxelo
yale mpazamo, kwaye nokuba yingxaki yehardware.
Ndikunye noSierrra kunye nazo zonke ezidlulileyo, bekusoloko kugqibelele.
kwaye ngoku ingxaki yehardware?
Emva kokuhlaziya iMasOS ePhakamileyo yeSierra 10.13, andisakwazi ukuhambisa iifayile ezinkulu kune-2 GB kwiDrive yangaphandle kwiFomathi ye-MS-DOS (FAT32), xa ndizama ukuyenza ndifumana isilumkiso esithi: Into "xxx" ayinakukhutshelwa kuba inkulu kakhulu kwifomathi yevolumu (yi-2,67GB)
Andinangxaki xa ndisebenzisa nayiphi na inguqulelo yangaphambili yenkqubo yokusebenza.
Ngaphandle koko ndisasebenzisa enye idrive yangaphandle njengesiqhelo.
Ndingenza ntoni ukwenza ukuba i-hard drive yam yangaphandle isebenze kwakhona, ngaphandle kokuyihlaziya?
UCarmelo, into onokuyenza kukuphosa iMac yakho enkunkumeni kwaye uthenge izinto eziyenzayo.
I-Fat32 ayixhasi iifayile ezinkulu kune-2gb, yifomathile kwi-exFat ukuze isetyenziswe kwiinkqubo ezahlukeneyo
Ayonyani leyo, zii-4GB, eneneni ndineefayile ezinkulu kune-2GB kwidiski enye.
Nasiphi na isisombululo koku?
Iyandicaphukisa into eyenziwe liapile okoko kwahamba iMisebenzi, kuyamangalisa ukuba baya kusuka kokubi ukuya kokubi ngakumbi, ndiye ndayihlaziya ukuya kwi-sierra ephezulu kwaye ibisisihlungu, kuba yonke le nkqubo iba ngumkhenkce, ayindivumeli ndivule ifolda, i iinkqubo abaziphenduli, kulungile ... yinto embi .... Kwaye ngoku andinakukwazi ukuba ufuna ukubuyisa iifayile zam ...
Phendula kwiinyawo zebhokhwe
Uxolo iinyawo zebhokhwe, ndiphendule kuFerransky endaweni yakho, kodwa ke, loo nto iyenzeka kuthi xa uthenga i-crap ngophawu lweMac, amaqela am alandelayo akazukuba nayo iapile ebolileyo njenge logo. Usale kakuhle uMac.
Isamsung 810 128GB SSD
UFerransky Uthetha ngantoni? Ngokweenkawu zaseMac, singabanye babambalwa abanengxaki zeenkqubo zabo, kuba yonke into isebenza njengekhubalo, bathengisa inkunkuma ngamaxabiso anyusiweyo, uyabathenga, benza imali eninzi, ukuba unengxaki Nge-crap abathengisela yona, ziingxaki zakho, abayikhathalelanga kwaye abayikhathalelanga loo nto.
ndivuma ngokupheleleyo. Ndinezinto zonke ukusuka kwi-mac: iphone, ipad, imac… benditshintsha yonke into iminyaka embalwa kuba ndidanile kwaye ndicaphukile. Emva kohlaziyo lwesoftware yokuqala okanye yesibini kuya kufuneka uyilahle kude isixhobo kuba ngokucacileyo abaphuhlisi bayo abenzi umsebenzi wabo kakuhle ukuqinisekisa ukungqinelana. Ucinga ukuba inkampani ebaluleke kangaka kwaye ivaliwe akufuneki ibenazo ezi ngxaki, kodwa uyamangaliswa. Okwangoku ndigcina iMac kuphela, phakathi kowama-2011, ethi emva kohlaziyo eSierra icothe kakhulu kwaye kungekudala ndiza kungena endaweni ngewindows pc.
UCarlos Arias sitsho
Ukusukela oko ndafaka iMac OS Hight Sierra, okokuqala isicelo "seMeyile" khange sindivumele ndicime iifayile emva koko kufakelo lwesibini, xa ndiyivulayo, yandicela ukuba ndikhuphele imiyalezo yam kuYahoo! Kwaye xa ndenza njalo, ndafumana umyalezo "kwenzeke impazamo", apho ndingasakwazi ukusebenzisa iMeyile konke konke. Ndijongane nokusilela kunye nezinye ezivelileyo, umzekelo kwiBitdefender, engazange indiphumelele iminyaka eliqela yosetyenziso, ndinayo wanyanzelwa ukuba abuyele kwi-Mac OS Sierra kwaye nantsi yonke into isebenza ngokugqibeleleyo. Ndicinga ukuba izinto ezininzi kufuneka zilungisiwe kwi-Mac OS Hight Sierra kwaye andikukhuthazi ukuyifaka okwangoku, de iApple isombulule ezi ngxaki, ngaphandle kweziphene ezikhuselweyo abanye abasebenzisi abazixelileyo kunye nokukhubazeka kofakelo ngenxa yeengxaki iFirmware.
Phendula uCarlos Arias
Carlos, inkqubo entsha crap, ukwazile njani ukubuyela kuhlobo lwangaphambili? Ngokweenkawu zaseMac ezingenakwenziwa.
Zama ukuqala kwakhona kwaye ucinezele u-Command + R. Uyicime onayo emva koko uyibuyisele: ukuba andiphazami, izakufaka iSierra eqhelekileyo ... undixelele ukuba iyakusebenzela.
Enkosi Fco. Sele ndiyenzile ngoluhlobo, kodwa ngawo onke amaxesha ndiyazinyanzela ukuba ndifake iMacOS Sierra 10.13 entsha kwaye ayizange indivumele ukuba ndibuyele kuhlobo lwangaphambili, ngoku ndibandezeleka kakhulu kuba le nkqubo intsha yokusebenza kubi, ndicinga ukuba iApple Sele ibetha ezantsi, kodwa banokundothusa ngobubhanxa obubi ngakumbi, kungoko kungcono ndicwangcise ukubuyela kwiWindows, ubuncinci apho bandivumela ukuba ndiqwalasele ikhompyuter enamandla endiyithandayo kwaye abandinyanzeli ukusebenzisa amakhadi emizobo ye-AMD.
Ewe ke andazi ukuba ndingakunceda njani ...
Ngokuka-Apple, ukuba ucinezela ukhetho, cmd + R; Uhlaziya inguqulelo yamvanje (iSierra ePhakamileyo), kodwa ukuba ucinezela kuphela amaqhosha e-cmd + R; Kuya kufuneka uhlaziye kuhlobo lwe-macOS iMac yakho eyishiye ngayo umzi-mveliso (iSierra eqhelekileyo).
Ukuba ufunda oku, sukuhlaziya kwiMacOs ePhakamileyo yeSierra, ndiyaphinda: SUKUYIPHAKAMISA, le ngxaki ayinakufakwa yingxaki encinci xa kuthelekiswa nokusilela kwabo baya kuba nako, ngolunye usuku oluhle baya kuthi ngekhe bakwazi ukufaka i-hard drive yakho njengesiqhelo kwaye kuya kufuneka bafomathile kwaye bafake ukusuka ekuqaleni, ngolunye usuku iphasiwedi okanye umlawuli akazukuziqonda kwaye kuya kufuneka baphinde bafomathe kwaye bafake ukusuka ekuqaleni, kwaye akukho kumisa phaya, ukuba basebenzisa iMac kuphela ukubhala ububhanxa ndicinga ukuba iinethiwekhi zentlalo banokuzisebenzisa ngaphandle kwengxaki, kodwa ukuba banezicelo ezininzi eziluncedo kwimisebenzi yabo yemihla ngemihla, okanye banemidlalo, uninzi lwazo luza kuyeka Ukusebenza kuba kungangqinelani nale nkqubo intsha, iiNkosi zeMac ziya zisiba mbi, kakhulu kangangokuba sele ndibona Windows 10 njengobuhle bokusebenza, ewe, ewe, ndiyazi, iinkosi ze-chafrosot zenza inkunkuma, kodwa iinkosi zeMac zigqithisile kuzo ngokwenza iinkqubo ezimbi, kuphela oko kugcinwa yiMac ngamaxabiso aphezulu, ekungafanelekanga ukuba uhlawulwe ngoku, ngaphandle kokuba unokudodobala kwengqondo okanye into ethile; UMac wayeka ukuba yile nto ebeyiyo, kufuneka uyamkele.
Ndine-Imac entsha evela kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye yandinika impazamo xa ndizama ukufaka iMacOS ePhakamileyo yeSierra ... Ndifumene uphawu olungavumelekanga olunemvelaphi emnyama kwaye ayindivumeli ukuba ndiqhubele phambili ...
Emva kokubonisana nenkonzo yezobuchwephesha yeApple khange bakwazi ukusombulula ingxaki kwaye bendilinde ukuba banditsalele umnxeba ngesisombululo ...
Emva kokufunda okuninzi ngeenxa zonke kumnatha, ndizamile oku: https://support.apple.com/es-es/HT204063 kwaye isombulule ingxaki kum!
Sele ndikwazi ukuyifaka ngaphandle kweengxaki kwaye yonke into ilungile ngalo mzuzu!
Ndiyathemba ukuba inokukunceda!
Ndikwazile ukumisela kwakhona i-MAC nge-url yenkxaso eyayinayo iFco.
Ubuncinci ndikwazile ukufaka kwakhona i-MAC SIERRA.
Kwaye usebenzise iTime Machine
Le ngxaki ubenayo, yingxaki encinci, awuyazi into ekulindeleyo, uya kuba sele ufumanise, bafumanise ibug enkulu kwii-macOs Sierra 10.13 ezibeka emngciphekweni onke amagama agciniweyo, kodwa inyani kukuba ukudlala komntwana xa kuthelekiswa nayo yonke into eyenziwa ngamanenekazi eApple kule nkqubo intsha yokusebenza.
Ukuba kukho umntu ofunda oku ngexesha: SUKUHLAZIYA.
Uyakwazi ukuxelela ukuba usebenzisa kuphela i-mac yakho ukuthayipha ububhanxa kwiinethiwekhi zentlalo, ndiyakwazi ukuxelela kwingcaciso yakho, ke, ulumkile. Ngaba uzisebenzisile zonke ii-neuron onazo ukwenza uluvo oluphezulu? Enkosi kubantu abafana nawe, iApple yenza imali eninzi ngokuthengisa iimveliso ezikumgangatho ophantsi. Baleka, yiya emgceni phezulu kwivenkile ye-Apple ukuze ube ngowokuqala ukuthenga ii-iPhones eziphosakeleyo.
Molweni nemibuliso kuyo yonke into endinixelela yona ndihlaziye i-macbook emhlophe ka-2010 ukuya kwi-osx ephezulu ngaphandle kwengxaki enkulu, iye yacotha kancinci kodwa sele iqhelekile, kuphela yingxaki encinci yemizobo endicinga ukuba ngenxa yenkumbulo d 2 gb qn yanele mhlawumbi ngememori engaphezulu ye-gb d isonjululwe, CHAO¡¡¡¡¡¡. kwaye ngethamsanqa kwii-ls ezingafakwanga kwaye bayiphumelele.
Sele unayo i-MacOS High sierra efakiweyo kunye nokubuyiselwa. Sebenzisa konke ukudityaniswa okuphambili okubonelelwa yiApple, andinakukufaka ngenxa yale mpazamo. Ivumela nje ukuba ndiyibuyisele kwakhona i-sierra ePhakamileyo.
Nceda, ukuba kukho umntu onesisombululo, ndixelele. Ngaphandle koko ndiza kugcina i-1000 yamaphepha asindayo (MacBook Air emva kwexesha ngo-2014)
Bazalwana, ndihlaziye le nguqulo intsha kwaye khange ndinike zinkcukacha zincinci ingakumbi kwi-desktop efanayo.Ndiqaphele ukuba xa kuguqulwa kwiscreen esigcweleyo imigca emi nkqo ibonakala ngathi imizobo ayihlaziywanga kakuhle.
umntu owenzeke okufanayo?
Kwenzekile kum ... Ndifumene umyalezo osele ukhankanyiwe malunga nengxaki kwaye xa ndizamile kwakhona ngenketho yokuqalisa kwakhona, sayifaka ngaphandle kwengxaki. Ukuba ... kuthathe ngaphezulu kweyure enesiqingatha, umyalezo oshiyekileyo awushukumi, isibini sokuqalisa ngokuzenzekelayo kunye nezinye izinto ezothusayo ngexesha lofakelo, kodwa lifakelwe kwaye lihlaziyiwe ngokugqibeleleyo.
Yonke le nto yenzeke kwiMini Mac eneminyaka emibini ubudala.
Ukuhanjiswa kuzama ukuhlangula iifayile kunye neefoto.
UJose Tovar sitsho
Kuyafana ne-macbok pro ene-ssd ebalulekileyo. Ukuqala ngomyalelo + R kundivumela ukuba ndifake i-OS sierra okanye ikopi yomatshini wexesha, ongakhange ndiwuhlaziye ngaphezulu konyaka, ke kuya kufuneka ndiphulukene neLOT yeefayile… ..
Phendula kuJose Tovar
USebastian Riquelme sitsho
I-hardbolt hard drive ayindiboni.
Phendula uSebastian Riquelme
Ndifumana nje umyalezo wokuba i-mac OS ayinakufakwa kwikhompyuter, ndiyiyiqale ngokutsha kwaye ngokufanayo, ndenza ntoni ???
Namhlanje emva kweveki yokufumana izaziso zohlaziyo «ndithathe ixesha» ukuhlaziya iMacBook Pro .... Eqale kwakhona kwaye kwimizuzu embalwa emva koko kwavela iscreen esimhlophe esinophawu "olwalelweyo"… ndiyicimile ndavula ndacofa. cmd + R… .. ukufumana kwakhona… ngoku ifaka kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra…. Andazi ukuba izakujongeka ilungile kuba iyakuthatha ixesha elimalunga neyure enesiqingatha.
Wowu! Babuhlungu kangakanani… .Bendingazi ngalo mbandela kwaye ndikhangela isisombululo ndifumene ibhlog yakho… ..KUNYE NOKUGQIBELA isilumkiso ESINGAHLAZI…
ENKOSI ngolwazi oluxabisekileyo.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndafaka isiciko sokhuseleko kwiMini, ngasekupheleni kuka-2012, kunye neSierra ePhakamileyo. Ayizange iphinde isebenze. Uhlala ekuqaleni kwebhloko, ene-bar epheleleyo.
Ndizamile iindlela ezahlukeneyo zokubuyisa (umsebenzisi ongatshatanga, i-alt + cmd + R + P, faka kwizixhobo zediski, kodwa akukho nto). Ndilindele ingcebiso, ngethemba lokuthintela ukufomatha kunye nokulahleka kwedatha ngenxa yoko.)
molo, sine-2013 macbook pro ene-macosx sierra yenyanga e-1 kunye phezolo ngesizathu esithile uhlaziyo oluzenzekelayo lwenziwe olubangela ukuba xa inkqubo iqalile kwakhona yayixhoma ngokupheleleyo kufakelo kunye ne icon engavumelekanga kwiscreen ngemvelaphi emhlophe.
Emva kokuzama izinto ezahlukeneyo kwaye ndingaze ndifune ukulahla ugcino lwexesha olwenziwe ngo-Okthobha kuba into endinomdla kuyo yayikukubuyisa iifayile ezenziwe ngoDisemba, ndazama i-safari kwimenyu yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye nangona kwakungekho siqinisekiso sokunxibelelana nenkxaso yezobuchwephesha. .. iwindow yengxoxo abangakhange baphendule kuyo, xa kuphuma kum kuye kwenzeka ukuba ndingenise isiqalo sediski kwaye xa ndiyibuyisela kwakhona inkqubo iqale kwakhona kwaye ndafumana yonke into ngesiqhelo.
Ndizakubuyela ndenze ukufakwa okungu-zero kunye nedatha efini kuba ndingakhange ndithembe nwele ... ndiphawula ngayo yonke le nto, ukubona ukuba ukwenza uncedo kuyenza na imiyalelo ngasemva evumela ukuqala ukuthintela iimpazamo kunye nokugqiba ufakelo lwale ndlela .. ngethamsanqa kwaye ndiyathemba ukuba uza kubuyisa iifayile zakho.
UJuan Pablo sitsho
Kwafuneka ndixhume kwidatha yeselfowuni kwaye ndikhuphele i-OS X El Capitan Isoftware yangaphambili kuba uhlaziyo luphosa impazamo nge-firmware ke landishiya ngaphandle kwezixhobo. Ndikwinkqubo yokubuyela emva. Hayi njakazi!
I-Thailand ilungiselela ukuvula iVenkile yayo yokuqala ye-Apple